ओट्टो लायर रोन सह-संस्थापक आधिकारिक रूपमा उबर छोड्छ | ग्याजेट समाचार
एक महिलाको दुर्घटना पछि उबरको लागि समस्याहरूको थुप्रो छ संयुक्त राज्य अमेरिका मा। दुर्घटनाको केही दिन पछि यो कम्पनी पहिले नै यसको स्वायत्त कारहरु संग पहिले नै समस्या थियो कि पता चला। केहि पहिले रिपोर्ट गरीएको थिएन। त्यसोभए कम्पनी फेरि स .्कटमा छ। एक संकट जुन अब लिओर रोनको राजीनामासँग जोडिएको छ.
लियर रन ओटोको सह-संस्थापक हो, स्वायत्त ट्रकिंग कम्पनी जुन २०१ber मा उबरले अधिग्रहण गर्यो।। तपाईंले यस संकटमा कम्पनी छोड्ने निर्णय गर्नुभयो। अमेरिकी कम्पनी को लागी एक नयाँ प्रमुख झटका।
उसको प्रस्थानका कारणहरूको बारेमा अहिलेसम्म केही पत्ता लागेको छैन। कार्यकारी न त उबर न त यसको बारेमा केही भन्न चाहेका छन्। कम्पनीले केवल भनेको छ कि तिनीहरू यस क्षेत्र मा आफ्ना परियोजनाहरु बारे उत्साही रहन्छन् र कि तिनीहरूले यातायात बजार क्रान्ति गर्न को लागी आशा गर्छन्।
त्यसैले यो आशा गरिएको छ कि चाँडै नै यो मार्चको कारणका बारे जान्न सकिने छ। कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण घाटा हुनुको साथै यसको लागि धेरै गाह्रो समयमा आउँछ। किनभने उबर स्वायत्त कारहरूको साथ यसको समस्याहरूको लागि फेरि अनुसन्धान भइरहेको छ।
साथै, अधिक जानकारी कम्पनीको स्वायत्त कारहरूको समस्याहरूको बारेमा देखा पर्‍यो। यो भनिएको छ कि उबरले कारहरूमा सुरक्षा सेन्सरको संख्या घटायो। केहि कारणले गर्दा उनीहरूको अन्धा स्थान भयो। त्यसो भए सडकमा केहि चीज पहिचान गर्न सकेन। कुनै श doubt्का बिना, केहि खतरनाक छ र दुर्घटना सम्बन्धित हुन सक्छ।
हामी देख्न सक्छौं कि कम्पनी विवादको केन्द्रमा छ, फेरी एकचोटी। अहिले दुर्घटनाको विश्लेषण भइरहेको छ र कम्पनीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैले हामी यसबारे छिट्टै सुन्ने आशा गर्दछौं। किनभने उबरले यो स्पष्ट गर्‍यो कि यसको स्वायत्त कारहरूमा केहि गलत छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ओटोको सह-संस्थापक लिओर रोनले उबर छोड्छ